3hp wejiga hal matoor ee iibka, 3 hp korantada korantada 3450 rpm wejiga hal
3hp koronto 3450 rpm hal mar oo kaliya oo la iibinayo
3 hp matoor koronto oo leh qiimo wanaagsan
3 hp matoor koronto oo leh qiime wanaagsan oo ka yimid Shiinaha iyo Hindiya.
3 hp mashiinka korantada hal weji oo gebi ahaanba xiran Fan-qaboojiye
3 hp motor koronto 3450 rpm hal weji oo si gaar ah loogu talagalay ka shaqeynta alwaaxa
3 hp waajibaadka mashiinka korantada ee korontada si loogu isticmaalo noocyo badan oo dalabyo beeraha ah.
3 hp koronto koronto 1725 rpm hal weji, Ilaalinta kuleylka otomaatiga ah, 115 Volt, 60 Hz
Ku Saabsan 3 hp korantada korantada
Sogears khadka balaaran ee Mashiinka Halbeegga ah ee Marxaladda Guud waxaa laga heli karaa Open Drip-proof iyo dhismaha TEFC oo ah hal waji, hal weji matoor koronto. Sidoo kale, 3 hp motor koronto 3450 rpm hal weji ayaa loogu talagalay in loogu isticmaalo aaladaha mashiinka, matoorrada, kombaresaradayaasha, gaadiidleyda, taageerayaasha iyo ujeedo kale oo guud. Waxaan halkaan u nimid inaan taageerno dhamaan howlahaaga biraha iyo dayactirka markii aad naga iibsato. Dhammaan noocyada korantada ee korantada 7.5 hp waa kuwo cusub oo aan la isticmaalin ama gacan labaad.
Waajibaadkayaga 3 hp ee mashiinka korantada korontada ayaa lagu heli karaa 3-waji, bilawga-bilawga, ama naqshadaha mashiinka mashiinka kala-baxa joogtada ah. 1 Wajiga - 1740 RPM - TEFC - Mount Rigid - 180 Frame - Taxanaha Waajibaadka Beeraha 3 hp qiimaha korontada loo dhisay ee loogu talagalay Warshadaha Beeraha adag. Iyagu waa kuwo tayo wanaagsan leh sida leeson 3hp motor phase phase.
3 hp mashiinka korontada ku shaqeeya oo leh tiro ballaadhan oo leh qiime weyn. Ka ilaalinta culeyska gacanta iyo kubbadda qaadista ee badbaadada iyo cimri dhererkaba. Sidoo kale 2 hp motor koronto 1725 rpm hal waji. Waxaa jira hal waji YL ah 20 hp 20 kw motor ac koronto yar, Guriyeynta Aluminium, haddii aad leedahay xal faras weyn ayaa loo baahan yahay. Soo iibso matoorro hal waji ah qiimaha ugu wanaagsan ee Hindiya ama Shiinaha Dukaankeenna waxaa loogu talagalay dhammaan noocyada kala duwan ee wajiga halbeegga induction & koronto soosaarka korantada.
3 hp motor 1440 rpm, waxay kufiican tahay gaar ahaan nooca yareynta xawaaraha, ama hoos u dhigga qalabka. Kuwaas oo u isticmaala geerka dixiriga dhammaadka hoos u dhaca. Baaxad-buuxis hadda ku jirta Amperes Marxaladda Halbeegga ah Xilliga hadda 2 hp koronto koronto 1725 rpm hal weji.
daydo Power (kw) Amps Speed EF. Fctorer Tareenka Torque Amps
Nala Soo Xiriir Fadlan Fadlan Haddii Aad Wax Su'aal Ka Tahay Xaaladeyntayada.